AlShabaab oo xukun dil ah ku fuliyay Nin mas’uul ah - Awdinle Online
AlShabaab oo xukun dil ah ku fuliyay Nin mas’uul ah
Xarakada Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe xukun dil ku fuliyey gudddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka HirShabelle.
Marxuumka oo 82 sana jir ahaa ayaa lagu magacaabi jiray, Cali Cabdullaahi Xasan, wuxuuna ahaa guddoomiyaha Xaafadda Buula Sheekh ee magaaladaasi.
Fagaare weyn oo ku yaala deegaanka Fiidow ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa lagu toogtay Cali Cabdullaahi Xasan oo ahaa gudoomiyihii xaafadda Buula Sheekh ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelllaha dhexe .
Maxkamad hoostagta Al-Shabaab ayaa sheegtay in marxuumka uu qirtay dhammaan dambiyadii lagu soo eedeeyay, kadibna lagu fuliyey xukun dil toogasho ah.
Sida wararka an ku helnay ayaa sheegaya in guddoomiyaha la toogtay deegaanka Fiidow bil ka hor u tegay, si uu marqaati ugu noqdo dad u Garsoor doontay Al-Shabaab.
Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in intii ay socotay dacwadda u dhexeysa dadkaasi ay maxkamadda gudaha u soo galeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo hubeysan, kadibna ay kala baxeen marxuumka oo ay ugu dambeyn shalay toogteen.
Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka HirShablle iyo kan degmada Jowhar oo ku aadan toogashada mas’uulkaasi.
Previous articleGuddoomiyaha Maxkamadda Rafcaanka Oo Booqday Xabsiga Dhexe
Next articleMamul Ahlusuna Oo Xabsiga Dhigay Askari Ka Tirsan Ciidanka Dowladda Somaliya